विदेशमा दु*:ख गरेको सम्पत्ति लिएर श्रीमती परपुरुषसँग भा*गेपछि रुदै भने आखिर म बाट के कमी भो ? (भिडियो हेर्नुहोस ) – सुदूरखबर डटकम
बाँकेको जानकी गाउँपालिका वडा नं. २ भैयापुरका ससिराम सुनार मलेसियाबाट श्रीमती खोज्न नेपाल आएका छन् । कामको सिलसिलामा मलेसिया पुगेका सुनारको घरमा आमा र श्रीमती सँगै बस्दै आएका थिए ।विदेशमा कमाएको पैसा आमा र श्रीमतीको खर्चको लागि समय समयमा पठाउँदै आएका सुनार २४ वर्षीया श्रीमती नीतु लोनियालाई खोज्न मलेसियाबाट नेपाल आएका हुन् । करिब ६–७ महिनादेखि श्रीमती नीतु सम्पर्क विहीन भएकी सुनारको भनाइ छ ।२०७२ सालमा जानकी गाउँपालिका बेलभारका नीतुसँग सुनारको विहे भएको भएको थियो । उनले भने, ‘करिब ६–७ महिना भयो, श्रीमतीसँग कुरा नभएको । कहाँ छ ? कस्तो अवस्थामा छ ? कहिले प्रहरी कार्यालय त कहिले शहर– शहरमा खोज्दै हिँडेको छु ।’
उनले थपे, ‘विदेश गएको ४ वर्ष भयो श्रीमतीलाई खोज्न भनेर विदामा आएको छु ।’ बेलभारकै राजाराम बर्माले इमो र फेसबुक मार्फत नीतुलाई पोखरामा राखेको जानकारीको आधारमा मलेसियाबाट नेपाल आएको सुनारको भनाइ छ ।विदेशमा कमाएको पैसा बारम्बार श्रीमतीको विश्वासको आधारमा पठाउँदै आएका सुनारले विवाहमा पनि ४ लाख खर्च गरेको बताएका छन् ।सुनारले श्रीमतीको खोजीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दिएका छन् । बेलभारका राजाराम बर्मा भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको सुनारको बताए । भिडियो हेर्नुहोस